त्रिशुली नदीमाथि बनाइएको पहिलो डबल लेनको 'आर्क ब्रिज' सञ्चालनमा – Samacharpati
Home » त्रिशुली नदीमाथि बनाइएको पहिलो डबल लेनको ‘आर्क ब्रिज’ सञ्चालनमा
त्रिशुली नदीमाथि बनाइएको पहिलो डबल लेनको ‘आर्क ब्रिज’ सञ्चालनमा
प्रकाशित मिति: 2076 श्रावण 15 बुधबार(July 31, 2019) 4:51 PM बजे Posted By:Sunita Karki
काठमाडौं, १५ साउन । मुग्लिनमा त्रिशुली नदीमाथि बनाइएको नयाँ पुल मंगलबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । सडक विभागका अधिकारीहरुले यसलाई नेपालकै सबैभन्दा पहिलो दुई लेनको र लामो ‘आर्क ब्रिज’ भनेका छन् । नेपालले आफ्नै लगानी, प्रविधि र दक्षता प्रयोग गरी यो आर्क ब्रिज निर्माण गरेको हो । सडक विभागको पुल महाशाखाका अनुसार २ वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने पुल ढिला गरी निर्माण सकिएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नयाँ प्रविधिमा नेपाली ठेकेदारले नै काम गरेकोले यो पुल बनाउँदा ढिलाई भएर तीनपटक म्याद थप गर्नुपरेको थियो ।
मुग्लिनमा बनेको १६० मिटर लामो यो पुल राजमार्गमा बनेको पहिलो डबल लेनको आर्क ब्रिज हो । निर्माणमा केही ढिलाई भए पनि नेपालले यो पुलबाट पर्याप्त अनुभव हासिल गरेको सडक विभागको पुल सेक्टर नम्बर २ का प्रमुख अंगलाल रोकाय बताउँछन् । ‘यसको अनुभव पछिलाई काम लाग्छ,’ उनले भने, ‘४ वर्षभन्दा बढी समय लगाएर बनेको पुल निकै बलियो छ । यसले मुग्लिनको पुरानो पुलमा उत्पन्न जोखिम पनि पार लगाएको छ ।’
यो पुलको निर्माण इलाइट एड्भेन्चर लोहनी जेभीले गरको हो । यो नेपाली ठेकेदार कम्पनी नै हो । डिजाइन एन्ट मल्टि मोडलमा बनेको पुलको डिजाइन पनि नेपाली ठेकेदारले नै गरेका हुन् । यो पुलमा १२० मिटरको आर्क छ । आर्क ब्रिजको बीच भागमा पिल्लर राखिँदैन । पुलमा पर्ने भार आर्कले नै थेग्छ । पिल्लरको सट्टा पुलको दुईतर्फ अड्याउन प्रयोग हुने ‘अब्यटमेन्ट’ को क्षमता बढाइन्छ । पिल्लर नहुने भएकाले यस्ता पुलहरु नदीमा बाढी आउँदा भासिने लगायतका समस्या हुँदैन ।
करिब १२ करोड खर्चिएर मुग्लिनमा वैकल्पिक पुल तयार भएको विभागले जनाएको छ । केही वर्षअघि मुग्लिनको त्रिशुली नदीको माथिको पुलमा गम्भीर समस्या देखिएको थियो । पुलको पाताहरु फुस्किन थालेपछि नयाँ पुल बनाउने योजना विभागले अघि सारेको थियो । मंगलबार खुला भएपछि पृथ्वी राजमार्ग भएर चल्ने सबै गाडीले नयाँ पुलको प्रयोग गरिरहेका छन् । अबको दशैंपछि पुरानो पुललाई पनि मर्मत गरेर सञ्चालनका लागि योग्य बनाइने सेक्टर प्रमुख रोकायले बताए । ‘पोखराबाट आएका गाडीलाई नयाँ र मुग्लनबाट पारी पोखरातर्फ जाने गाडीलाई पुरानो पुल प्रयोग गराउने योजना छ,’ रोकायले भने, ‘समस्या देखिए पनि त्यसलाई हल गरेर चलाउँदा अझै २० वर्षजति पुरानो पुलमा सवारी गुड्न सक्छ ।’
Tags: ‘आर्क ब्रिज’, त्रिशुली नदी, मुग्लिन
नेपाल चलचित्र कलाकार संघ द्वारा इनासलाइ बधाई
जान्नुहोस् ! सोयाविनका फाइदा अनि बेफाइदाको बारेमा
नेपाल आइडल सहभागि रहेकी अस्मिता अधिकारीको ‘त्यो
”मेरी पुजा” लिएर आउदैछन् ! कौशल र बिशाल
प्रमोद खरेलको स्वर रहेको नयाँ गीत ‘पहिले दिल’ को लिरिकल भिडियो सार्वजनिक
युवा व्यवसायीहरुको साझा संगठन युनाईटेड कमर्सियल कम्युनिटि गठन